Home » Music » နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်ရှစ် – Sai Htee Saing (Radio Kamayut)
+ + + + + ++ + + + + ++ + + + + ++ + + + + ++ + + + + ++ + + + + ++ + + + + +
ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက် ကျက်တယ် ဆို ပေမဲ့ စာကို တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး/ဆရာမကြီး များ ကျေးဇူးကို ပူဇော်ကန်တော့ ရင်း ….
အိမ်ကကလေးတွေကတော့ ဟိုတ၀က် ဒီတ၀က်ဆိုတော့…..
အလီကို အလွတ်ရနေတာကိုပဲ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေက အံသြအထင်ကြီးနေကြတာ။
ငယ်ငယ်က စာကျက်ရင် အသံထွက်ကျက်ဖို့ လူကြီးတွေက ပြောကြတယ်။
ွှအဲဒီမှာ သမိုင်းကို ပုံပြင်ပြောပြသလိုပြော၊ documentary ရိုက်ပြီး အကြောင်းအရာကို ဆက်စပ်ပြောပြသွားတဲ့ သင်ကြားမှုနည်းစနစ်မှာတော့ သမိုင်းကိုတောင် စ်ိတ်ဝင်စားပြီး အတန်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးရောက်သွားတယ်။
ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ်ပြန်စစ်တာ လို့ ခံယူရမယ်ထင့်
.ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆရာ/မ
အရီးပြောမှ ငယ်ငယ်က စာအော်ကျက်ခဲ့တာကို ပြန်လွမ်းသွားပြီ…သူများတွေ အိပ်ကောင်းချိန် သန်းခေါင်ကျော် တိတ်နေတဲ့အချိန်မှ စာကျက်ကောင်းတာမို့.. သူများတွေ အိပ်ရေးပျက်အောင် အော်ခဲ့တာတွေကို သတိရမိတယ်… စာတကယ်တော်တဲ့သူတွေက တိတ်တိတ်လေးနဲ့ ငြိမ်ပြီး ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေများတာမို့ စပ်စလူးထပြီး အော်ဟစ်ကျက်နေတဲ့ အနော့်ကို အထင်မကြီးကြတာမျိုးလည်း ကြုံခဲ့ပါရဲ့… ဒါပေမယ့် စာကိုတစ်ပုဒ်လုံး concept မိအောင် နားမလည်ဘဲ ဘယ်လိုမှ အလွတ်ကျက်လို့မရတာကတော့ ကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲ ထင်တယ်… စာတစ်ပုဒ်လုံးကို အရင်ဖတ်တယ်… ဆက်စပ်နားလည်အောင် ကြည့်တယ်… အချက်တွေအကုန်လုံး ဆက်စပ်မိပြီဆိုရင်တော့ လာထားပဲ.. တစ်ကြောင်းချင်းကြည့်အော်လိုက်..ပြန်စဉ်းစားပြီး အလွတ်အော်လိုက်နဲ့… ရသွားပြီဆိုရင် ချရေးတော့တာ… ပြီးရင် စာအုပ်နဲ့ ပြန်တိုက်စစ်… မမှန်သေးရင် ပြန်ရေး.. အဲဒီလိုနဲ့ ၁၀ တန်း အောင်ခဲ့ပါလေရော..
တကယ်တော့ အကျင့်ပါသွားတာ.. ငယ်ငယ်က စာပြိုင်ဘက်တွေရှိတော့ ဆရာတွေက သည်၊၏ လွဲရင်တောင် အမှတ်လျှော့ပစ်တာဆိုတော့ တစ်လုံးမလွဲမရရင်ကို ယုံကြည်မှုမရှိတော့တာ.. ခုထက်ထိပါပဲ အရီးရယ်… မိန်းထဲမှာ ကျောင်းတက်တော့ ဒုက္ခရောက်လိုက်တာ… ကိုယ့်စကားနဲ့ပြန်ရေးရတာလေ… ဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိလို့…
ဖြစ်နိုင်ရင် စာသင်ခန်းထဲက သင်နည်းတွေကို ပြောင်းပစ်ချင်တယ်… တွေးမိတယ်.. ငါသာ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် ဆိုပြီး…
ကျွန်မကတော့ စာအော်မကျက်ခဲ့ဘူးအရီးရေ …
.. ရေဒီယို ကမာရွတ်၊ သေပြီဆို တဏှာခြွတ်၊ ဖြေဆည်လို သဒ္ဓါညွှတ်၊ လေပြည်ချို ကဗ္ဗလာစွပ်
စာကိုအကျယ်ကြီးအော်ကျက်မှ ရတဲ့အထဲမှာ ကျတော်လည်းအပါအ၀င်ပါပဲ။ သုံးလေးအိမ်ကြားအောင် အော်ကျက်ပြီ အသံတွေလည်း ဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဆယ်တန်းတုန်းကတော့ ဘောဂဗေဒနဲ့ မြန်မာစာကို မကျက်ဘဲ ကိုယ့်ဖာသာ စကားပြေတွေ အလင်္ကာတွေကို လက်တန်းရေးနိုင်အောင် ကျင့်ခဲ့တယ်။ စာစီစာကုံးကောပေါ့။း)))
အလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတိုင်း ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက်မဟုတ်တာတော့ အသေအချာပါ။ ကျက်ဖို့လိုရင်တော့ ကျက်ရမှာပေါ့။ အဓိက က နားလည်မလည်နဲ့ပဲဆိုင်တာလေ နော့။
စကားစပ်မိလို့ ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်က အတော်ကောင်းနေကြောင်းကို တခြားနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ဖူးမှ ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိခဲ့ရသလို အရင်က ပညာကို ကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်လဲ တော်တော်ကို နောင်တရသွားဖူးပါတယ်။
ဒါနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့၎နှစ်လောက်တုန်းက အိမ်ဘေးက ကောင်မလေးကို စောင်းပြီး ဒီသီချင်းကို ဆိုခဲ့ဖူးတယ်ဗျ
. ရေဒီယိုကမာရွတ် အပါအ၀င် ထီးဆိုင်သီချင်းတွေတော့ အသဲစွဲပါပဲ
.အိမ်ကနှစ်ယောက်လုံးလည်း ဘာသံမှမထွက်…တိုးတိုးတော့အသံထွက်ဖတ်တာတွေ့ရဲ့ :))
ကောင်းကင်ပြာရဲ့ အမေကိုယ်တိုင်ကလဲ စာအော်ကျက်သံကို သိပ်နားထောင်ကောင်းတယ် ထင်ခဲ့တာ…
စာ အကျယ်ကြီးအော်ကျက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့
ခုချိန်မှာရေဒီယိုကမာရွတ် လေးတွေ ရင်ခုန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့
ရေဒီယို ကမာရွတ် ဆိုတော့
​ကျောင်းစာတိုင်း အလွတ်​ကျက်​ရမယ်​ဆိုတာကို​တော့ ကျ​နော်​မကြိုက်​ဖူးဗျ ။ တက္ကသိုလ်​တုန်းက ဆရာတစ်​​ယောက်​က​ပြောဖူးတယ်​ ။ ဘယ်​စာမျိုးမဆို အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားလို့ရသတဲ့ဗျ ။
ဒီတစ်ခါမငြင်းပါ အဘနီ ရေ၊
ဝင်ပြီးအားပေးသူများ အားလုံး ကိုကျေးဇူးပါရှင့်။
စာ​မေးပွဲ အစဉ်​အလာ မဖျက်​ဖူးဆိုရင်​ သင်​ထားတဲ့ စာ​တွေဘယ်​လို/ဘယ်​​လောက်​ထိနားလည်​သလဲ ဆိုတာကို တစ်​ဘာသာ အမှတ်​သုံးဆယ်​ဖိုး​လောက်​ Unseen ​မေးခွန်းထည့်​​မေးမယ်​​လေ။ ဘယ်​လိုသ​ဘောရ ။
ကျွန်မတို့ တုန်းက စာမေးပွဲ ဖြေရင် တိုက်ရိုက် လာနိုင်တဲ့ အပိုင်း နဲ့ ဉာဏ်စမ်းလာနိုင်တဲ့ အပိုင်း ခွဲ ပြီး မေးပါတယ်။